Watch.man.ngee by Murann Ezine 372 views
Rogman.01 36.lesson.11nov2014 by Murann Ezine 297 views
New.life.ii.12.lessons by Murann Ezine 618 views
Ch livinglessons.2014 by Murann Ezine 2884 views
1. ပညတ်တရား ပြောင်းပြန် စာရေးသူ- Brother Jake Sandong ခရစ်တော်မြတ်၌ စာရေးသူ- Brother Jake Sandong မြန်မာလိုဘာသာပြန်သူ- Sein Ram (N) ကနေဒါ၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၄
2. 1 ပညတ်တရား ပြောင်းပြန် စာရေးသူ- Brother Jake Sandong ကနေဒါ၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၄ အကြောင်းအရာများ ၁။ ရေးရသည့်အကြောင်း ၂။ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်၏ အဓိပ္ပါယ် ၃။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ပညတ်တရားနှင့် အရင်းအမြစ် ၄။ စာတန်၏ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်နှင့် အရင်းအမြစ် ၅။ ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခြင်း (Evolution) သင်ကြားပို့ချမှုသည် ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်များဖြစ်ခြင်း (က) ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခြင်းအယူအဆ (Evolution Theory) နှင့် သိပံ္ပအတတ်ပညာမတူညီ သည့်အကြောင်း ၆။ ကမ္ဘာ့လူသားတွေ ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသည့် (Evolution) နောက်သို့လိုက်ခြင်း ၇။ အသင်းတော်များ ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသည့် (Evolution) နောက်သို့လိုက်ခြင်း (က) လူအများနောက်သို့ မလိုက်မိစေရန် (ခ) အသင်းတော်သမိုင်းနောက်သို့မလိုက်ရန် (ဂ) မမှန်ကန်သော သင်ကြားမှုများကို လက်ခံခြင်း“ (ဃ) ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်တွေကို မခွဲခြားတတ်ခြင်း (င) ၀ိညာဉ်ရေးရာလမ်းတွင်လည်း ဘုရားသခင်ကိုမသိသောသူများဦးဆောင်သလို ဦးဆောင်ခြင်း (စ) အပြစ်နှင့် စာတန်လူကို မခွဲခြားတတ်သည့်အကြောင်း (ဆ) ယုံကြည်ခြင်း (Faith)နှင့် ၀ိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံခြင်း(Anointing)ကို မခွဲခြားတတ်အောင်လုပ်ခြင်း (ဇ) ခန္ဓာရေးရာကိုပဲ မြင်နိုင်ခြင်း (ဈ) ဘုရားသခင်ကို အားမကိုးခြင်း ၈။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်မှ ကယ်တင်ပေးခြင်းအကြောင်း (က) ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတွင် မည်ကဲ့သို့ သွန်သင်လမ်းပြရန် (ခ) အသင်းတော်အတွင်း မည်ကဲ့သို့ သွန်သင်လမ်းပြရန် ၉။ အဘယ်ကြောင့် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးများကိုပေးခဲ့သည့်အကြောင်း ၁ဝ။ ရှင်ပေါလုသည် ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်မှ မည်ကဲ့သို့ လွတ်မြောက်လာခဲ့သည့်အကြောင်း ၁၁။ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်၌ သာ၍ကြီးမြတ်သောသူ ၁၂။ ဘုရားသခင်အသုံးပြုခဲ့သည့်အရာဝတ္တုများနှင့် လက်ရှိအသုံးပြုသည့်အရာဝတ္တုများ ၁၃။ သေးသိမ်မှုမရှိစေရန်နှင့် ကိုယ့်ကိုမကျိန်မိစေရန် ၁၄။ ကျွန်ုပ်အသက်တာမှာ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်မှ ဘယ်လိုကြိုးစား လွတ်မြောက်ခဲ့သည့်အကြောင်း ၁၅။ ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မှုသော“လူ”
3.2ပညတ်တရား ပြောင်းပြန် အမှာစာ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤစာကို ဖတ်သူတိုင်း ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားပါစေ။ ဘုန်းကြီး တော်မှုသော သခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌ အာမင်။ ဤစာရေးရသော အကြောင်းအရင်းသည် စာတန်မာနတ်၏ ကြံစည်သည့်လုပ်ငန်းများကို ဘုရားသခင်မှလာသော လမ်းညွှန်မှုဟု ထင်မှားသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြံအစည်တော်သည် ရှေးဘိုးဘေးခေတ်မှ ကမ္ဘာ့လူသား များအတွင်း ဝှက်ထားသည့် ဓလေ့ထုံးစံတစ်ခုလို လှည့်စားပြောင်းလဲခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ဖော် ထုတ်တင်ပြရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစာကိုဖတ်ပြီးနောက် လောကလူသားများ၊ အသင်းတော်များအားလုံးသည် ဘုရား သခင်စေခိုင်းချင်သည့် အဆင့်မှ လမ်းလွှဲပြီး ဝေးကွာစွာသွားနေသည်ကို မြင်တွေ့လာလိမ့်မည်။ တစ်ဦးဦးကို ရည် ညွှန်းပြီး ရေးသားရခြင်းမဟုတ်ပါ။ စာတန်မာနတ်၏ လေ့စားဖြားယောင်းသွေးသည့်အလုပ်ငန်းများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း အားဖြင့် ရေးသားရခြင်းဖြစ်သည်။ လူမျိုးများအတွင်းတွင် အဖြစ်ပျက်နေသောကြောင့် ရေးသားရခြင်းမဟုတ်ပါ။ လူမျိုးတကာနှင့် အသင်းတော်တိုင်း ဖြစ်ပျက်နေသည့် အကြောင်းအရာကို ဦးစွာမှာချင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်ကို နိုးဆော်ဖော်ပြမြင်ခိုင်းစေသည့် အကြောင်းအရာဖြစ်သောကြောင့်၊ သင်တို့ကိုလည်း သိစေချင်ပါသည်။ အချိန်ယူပြီးဖတ်သောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အချို့သောသူများအတွက် မစဉ်းစားထားသည့်အကြောင်းအရာများ ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသူများအတွက် ချက် ချင်းခံယူရန် ခက်ခဲသည့်အချက်များ ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း မလိုပါ။ ကိုယ်လက်ခံနိုင်သလောက်ကို လက်ခံပါ။ ဤစာဖတ်သည့် အချိန်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လက်တော်ထဲအပ်နှံပြီး၊ နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းအားဖြင့် ထွန်းလင်းပြီး ဖတ်နိုင်ပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၁။ ရေးရသည့်အကြောင်း (က) သခင်ယေရှုထံသာ၍ ချဉ်းကပ်စေရန်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် ပိုမိုရင့်ကျက်စေရန် ဖြစ်သည်။ (ခ) ဤကမ္ဘာကြီးအတွက် ဘုရားသခင်၏မှုလအရင်းအမြစ် ပညတ်တရားသည် ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့သည်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်း (ဂ) စာတန်မာရ်နတ်၏ ကြီးမားစွာဝှက်ထားသည့်လုပ်ငန်းများကို ထုတ်ဖော်ခြင်း (ဃ) ကျနော်ဘာမှ မသိဘူး၊ ဘာမှမဟုတ်သူပါလို့ ပြောတဲ့သူများကို သခင်ဘုရား၌ ခွန်အားပေးခြင်း (င) ဦးဆောင်သူများကို ခွန်အားပေးရင်း နိုးဆော်ခြင်း (စ) အသင်းတော်များ စည်းလုံးညီညွတ်စေရန် (ဆ) ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်ဒေသအပေါ်တွင် ဘုရားသခင်ကူညီပြီး ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးရန် ၂။ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်၏ အဓိပ္ပါယ် ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်စီစဉ်ထားသည့် ပညတ်တရားကို တိုက် ခိုက်လက်ခံခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ စာတန်မာရ်နတ်၏ မမှန်ကန်သောတရားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို ခြေထောက်ဖြင့် လှမ်းလျှောက်ရန် ဖန်ဆင်းထားသော် လည်း၊ အကယ်၍ လူသားများ ပြောင်းပြန်လျှောက်နေရင် ထိုဘုရားသခင်ကို တိုက်ခိုက် သောနည်းလမ်း တစ်မျိုးသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူသခင်ယေရှုသွန်သင်သည့် စကား
4.3များကို အတိအကျလိုက်နာမှုမရှိရင် ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်တွင် ပြောင်းပြန်လျှောက်နေသည့်လမ်းဖြစ် သည်။ ကမ္ဘာ့လူသားအများပိုင်းသည် ပြောင်းပြန်လျှောက်နေသည်ကို သတိထားမရိပ်မိသလို ဖြစ်နေသည်။ ပြောင်း ပြန်လျှောက်နေသည့် လမ်းကို ကောင်းမွန်သောလမ်းအတိုင်း လျှောက်နေသည်ဟု အများပိုင်းက မှားယွင်းစွာ လျှောက်နေသူများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗတ္တဇံဆရာယောဟန်သည့် “ပြန်လှည့်လာပါ” မေတ္တာ ဖြင့် နိုးဆော်ခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်သည် “နောင်တရကြလော့”ဟု ခေါ်နေသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်လာသည့် အချိန်မှ သတိယလန့်နိုးခြင်း တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းကို ပြောင်းပြန် လျှောက်နေသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ထုတ်ဖော်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်သည် စာတန် မာရ်နတ်၏ လျှို့ဝှက်ကြံစည်ထားသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့်၊ အလွယ်တကူ မမှတ်မိနိုင်မှုကြောင့်ချက်ခြင်း လက်ခံလျှောက်လှမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ် တော်လေ့လာသောသူများသည်လည်း မာရ်နတ်၏လျှို့ဝှက်သည့် အကြံစည် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖော်ထုတ်ရန် မလုံလောက်သေးသလို ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာဦးအစမှာ ဘုရားသခင်သည် လူသားနဲ့ အရာခပ်သိမ်းများကို အပြစ်ပြောစရာမလိုအောင်နှင့် ဘုရားသခင်ဘုန်း တော်ပါအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သို့သော် အာဒံနှင့် ဧဝတို့ စာတန်မာရ်နတ်စကားကို လက်ခံယုံကြည်ခဲ့သည့် အချိန်မှစပြီး၊ လူသားတွေ သာမက အပင်ပေါက်သည့်အရာခပ်သိမ်းနှင့် တရိစ္ဆာန်အားလုံးတို့သည် စာတန်မာရ်နတ် ထိန်းချုပ်သည့် အောက်မှာကျဆုံးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစတင်ပြီး ဘုရားသခင်စီမှန်ခွဲ ခန့်ထားသည့် ပညတ်တရားကို ပြောင်းပြန်လျှောက်လှမ်းခိုင်းပြီး အုပ်ချုပ်ခြင်းခံနေရသည်ကို ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်လို့ အမည်ခေါ်ရခြင်းဖြစ် သည်။ စာတန်၏ ပညတ်တရားပြောင်းပြန်ဖြစ်သောကြောင့် “ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခွန်အားကြီးသောသူများက ခွန်အားနည်းသော သူများကို အုပ်ချုပ်ပြီး အနှိမ်ခံရမှုအောက်တွင် လိမ်ညာခိုးမှု၊ သတ်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်း၊ ပျက်စီးစေအောင်ကြံစည်ခြင်း” အရာများသာဖြစ်သည်။ စာတန်လုပ်ငန်းများသည် ခိုးမယ်၊ သတ်မယ်၊ ပျက်စီးမည့် အရာအများဖြစ်သည်။ “သူခိုး သည် ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းငှါသာလာတတ်၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို့သည် အသက်လွတ်ရုံမျှမက အထူးသဖြင့် အသက်ဖြင့်ပြည့်စုံ စေခြင်းငှါ လာသတည်း။” (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁ဝး ၁ဝ) စာတန်၏ ပညတ်တရားကို ရုတ်တရက်ကြည့်လျှင် ဘုရားသခင်၏ကြံစည်ထားသည့် ကမ္ဘာဓလေ့ထုံးစံတရားတစ် ခုဖြစ်နေသလို ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းအားဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ထွန်းလင်းကြည့် လျှင်၊ ကောင်းမွန်သော ပညတ်တရားမဟုတ်ကြောင်းကို သိရှိသည်။ ထိုပညတ်တရားအတွင်း၌ ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်၊ အလိုတော်ကို တိုက်ခိုက်သောအားဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုပညာတရားကို သခင်ယေ ရှုအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်စွာလျှောက်လှမ်းရန် ပြုပြင်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဂတိတော်စကားများကို အတိအကျမ လိုက်နာပါက စာတန်၏ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်အတွင်းတွင် လက်ရှိနေထိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၃။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်နှင့် အရင်းအမြစ် ဖြစ်သမျှအားလုံးသည် ဘုရားသခင် ကနဦးဖန်ဆင်းခဲ့စဉ် အတိုင်းဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာနေထိုင်ခြင်း၊ ယူဆခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ကနဦးဖန်ဆင်းခဲ့စဉ်က ကိုယ်တော်ဘုန်းတော်ပါလျှက်၊ ချို့ယွင်းချက်မရိ်ှ၊ အပြစ်တင်စရာမရှိ အောင်ဖန်းဆင်းခဲ့သည်။ ကောင်းကင်ဘုံမှ လူစီဖာနှင့် တပည့်တော်များအားလုံးကိုလည်း အင်မတန်မှ ချောမော လှပသည့် ကောင်းကင်တမန်လို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အာဒံနှင့် ဧဝ၎င်း၊ အခြားကောင်းကင်ဘုံနှင့် မြေကြီးအပေါ်ရှိ သတ္တဝါများကို ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှား အောင်ပြည့်စုံစွာ ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လူသားကို ဖန်ဆင်းခဲ့စဉ်အခါ ခင်ဗျားလို လူကများ ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ ဘာသွားလုပ်မှာလဲ။
5.4အခြားသောအရာများထက် ဘုန်းတော်ထင်ရှားစွာနှင့် ကိုယ်တော်၏ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့့််အညီ ဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်နိုင် ရန်ဖန်းဆင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသည့် လက်ယာတော်များကိုကြည့်ပြီး ကျေနပ်လျှက်ရှိသည့် အကြောင်းကို “ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကို ဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၍” ဟု ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း ၁၈ တွင် ရေးသား ထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် ခွန်အားကြီးသူများက ခွန်အားနည်းသောသူများကို ခွဲခြားဆက်ဆံပြီး၊ အနှိမ်ခံရန် ဖန်ဆင်းထား ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤအရာကို သဘောပေါက်နားလည်စေရန် အရေးကြီးဆုံးသော အချက်ဖြစ်သည်။ အစားအသောက် များအစရှိသောအရာများအတွက် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးမနာလို မုန်းတီးမှုပွားများအောင်၊ လုယူသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စေရန် မဖန်ဆင်းခဲ့ပါ။ ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲဆိုရင် ရေလွှမ်းမိုးခြင်း မတိုင်ခင်တွင် လူနှင့် တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့အသက်ရှင်ရေးအတွက် အသီးနှင့် သစ်စေ့ မျိုး များကိုစားစရာဘို့ ဘုရားသခင်ပေးခဲ့သည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း ၂၈-၃၁ တွင်ဖတ်နိုင်သည်။ ရေလွှမ်းခြင်း ပြီးနောက် တိရစ္ဆာန်များကို လူတွေစားရန် ဘုရားသခင်စီစဉ်ခဲ့သည်။ “အသက်ရှင်၍ လှုပ်ရှားတတ်သမျှသည်၊ အသီးအရွက်ကဲ့သို့၊ သင်တို့စားစရာဘို့ ဖြစ်ရမည်။ ခပ်သိမ်း သောအရာတို့ကို သင်တို့၌ ငါအပ်ပေး၏။” (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၉း ၃) ၄။ စာတန်၏ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်အရင်းအမြစ် သို့သော် ကောင်းကင်ဘုံရှိ လိုစီဖာနှင့် အပေါင်းအဖော်ကောင်းကင်တမန်တော်အချို့သည် ထာဝရဘုရားစိတ်တော် ကို တိုက်ခိုက်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်မှ မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုသူများသည် ဘုရားသခင် ကိုတော်လှန်သည့် စာတန်မာရ်နတ်အဖြင့် ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ထိုနည်းအတူ အာဒံနှင့် ဧဝသည်လည်း ဘုရား စကားနှင့် စိတ်တော်ကို နားမထောင်အလေးမထားပဲ၊ စာတန်စကားကိုနားထောင်သောကြောင့်၊ လိုစီဖာတို့လို ဘုရား သခင်၏ မျက်မှောက်တော်မှ မောင်းထုတ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစတင်ပြီး၊ လူသားများသည် စာတန်၏လက် တော်ထဲတွင် ရောက်ရှိလာရခြင်းဖြစ်သည်။ စာတန်၏ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်အားဖြင့် အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် အပြစ်ပြုလုပ်လာရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းလမ်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သတိမထားသည့်အချိန်တွင် စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့မျက်လုံးကွယ်အောင်လုပ်ဆောင်သည်။ အပြစ်သည် စာတန်၏ လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့်၊ အပြစ်အတွင်း ကျခြင်း၊ အပြစ်ရှိခြင်းဆိုသော စာတန်၏ အုပ်ချုပ်ခံသည်၊ စာတန်စကားနားထောင်သည်၊ စာတန်လူဖြစ်သည်ဟူ အဓိပ္ပါက်တက်ရောက်သည်။ စာတန်ရှိသောနေရာတွင် အပြစ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အပြစ်ပြုလုပ်သောသူများတွင် စာတန်ရှိပြီး၊ အုပ်စိုးလျှက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ စာတန်၏ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်အတွင်း၌ရ်ှိသော လူများသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်မရှိ၊ အသရေပျက်ဖြစ် လာသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ (ရောမသြဝါဒ ၃း ၂၃) နှုတ်ကပတ်တော်၌ ဖန်ဆင်းထားသည့် အရာခပ်သိမ်းတို့ကို ဘုရားသခင်၏ ကနဦးဖန်ဆင်းခြင်းအဆင့်သို့ ပြန်လည်ဖြစ်မည်နေ့ရက်ကို အလွန်တောင့်တမြော်လင့်လျက်နေ၏ဟု ဖော်ပြထားသည်။ (ရောမသြဝါဒ ၈း ၁၈-၁၉) မာရ်နတ်သည် ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ လူအသက်ကိုသတ်သောသူဖြစ်၏။ (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈း၄၄) မာရ်နတ်၏ လုပ်ငန်းများသည် ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းသာ ဟုတ်သည်။ (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၀း၁၀) ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းမှ မာရ်နတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့မျက်စိကို ကန်းအောင်လုပ်ပြီး၊ အပြစ်အတွင်း ပြောင်းပြန်လျှောက်လှမ်းနေသည် ကို မသိခိုင်းပါ။ စာတန်သည် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားသည့်လူကို ဘုရားပုံဏ္ဌာန်တော်နှင့် ဘုန်းတော်များကို ဖျက် စီးပြီး၊ ဘုရားထည့်ထားသည့် စိတ်နေသဘောထားနှင့် အကျင့်ကိုလည်း ဖယ်ထုတ်ပြီး၊ ဘုရား၏ အမွေအနှစ်တွေပါ
6.5ခိုးယူဖျက်စီးစေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် အမိန့်အာဏာ၊ ပညတ်တရားတွေကိုလည်း ခိုးယူခဲ့သည်။ ဘုရား သခင်သည် လူသားများအားဖြင့် ဤလောကကြီးကို အုပ်စိုးစေရန် အမိန့်တော်ရှိခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း၂၆) သို့သော်လည်း လူသည် တိရစ္ဆာန်လောက်တောင်အဆင့်တန်းမရှိ၊ အဖက်ဖက်တွင် ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ၅။ ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခြင်း (Evolution) သင်ကြားပို့ချမှုသည် ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်များဖြစ်ခြင်း စာတန်၏ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်ကို ဘုရားသခင်ကိုမသိသော လောကပညာရှင်တွေက ပြန်လည်အသုံးပြုပြီး၊ တဆင့်ပြန် သင်ကြားပို့ပေးသည်။ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်ကို ပညာရှင်များသည် ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသည့် (Evolution Theory) ဟု ခေါ်လျှက်ရှိသည်။ ထို (Evolution Theory)၏ လိမ်ညာသည့် စကားသည် “ခွန်းအားဗလ ကြီးသောသူများက ခွန်အားနည်းသော သူများကိုနိုင်စားပြီး၊ ခွန်းအားဗလကြီးသော သူများသာလျှင် အသက်ရှင် ကျန်ရစ်မည်။” အင်္ဂလိပ်စကားသည် “The Strongest rules by destroying the weak” ဖြစ်သည်။ Evolution theory သည် လူတွေကို လိမ်လည်မူတွင် ပထမဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သည် “ပညာရှင်တွေပြောသာမှန်တယ်” ဆိုပြီး စုံလုံးကန်းယုံကြည်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အချို့သော အသင်းတော်များတွင် ထိုကဲ့သိ်ု့ သင်ကြားပို့ချခြင်းကို လက်ခံယုံကြည်ကြသည်။ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်အောက်မှာနေသောကြောင့် အရာခပ်သိမ်းတို့ကို ယုံကြည်လက် ခံခြင်းသည် မဟုတ်မမှန်သည့်အရာဖြစ်သည်။ Evolution သည် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်မရှိကြောင်း၊ ခပ်သိမ်းသော အရာများသည် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီအချိန်ကြာလာသောအခါ၊ အရာဝတ္တုများ ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပြီး အခြား သောအရာတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲဖြစ်စေသည်ဟု ပြောသည်။ လူသည်လည်း ကမ္ဘာဦးအစကတည်းက မျောက်မှ ဆင်း သက်လာပြီး ပြောင်းလဲလာသည်။ ဤကမ္ဘာသည်လည်း နှစ်ပေါင်း ၄.၅ ဘီလီယံ လောက်ကြာလာသည်ဟု ယုံကြည် ပြောဆိုသည်။ ဤကဲ့သို့ သင်ကြားပို့ခြင်းကို ဇာတိအပိုင်းအားဖြင့် ကြည့်လျှင် အမှန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ယုံနိုင်သလိုရှိသည်။ တိရစ္ဆာန် တွေသာ မက၊ ပေါက်သည့်သစ်ပင်ကြီး၊ တောနက်များလည်း၊ မလှုပ်ရှားသည့် ကျောက်ခဲ၊ မြေကြီးတွေလည်း ထိုနည်းအတူ ပြောင်းလဲလျှက်ရှိသလိုဖြစ်သည်။ လူသားများသမိုင်းအကြောင်းကို ပြန်လည်လေ့လာသည့်အခါ ထိုနည်းတူ ဖြစ်သလိုဖြစ်သည်။ ခွန်းအားဗလကြီးသောသူများက ခွန်အားနည်းသောသူများကို အနိုင်ကျင့််အုပ်စိုးသ လို၊ သတ်ဖြတ်ပြီး နိုင်စားသလို တွေ့မြင်ရသည်။ လူတွေကြား နယ်မြေ၊ နိုင်ငံလုရက်မှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာစစ်၊ ပြည်တွင်းစစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်မှုတွေအားလုံးသည် လောက၏ ဓလေ့ထုံးစံတစ်မျိုးလို ဖြစ်လာခြင်း မဟုတ်ဘူးလား။ နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းအားဖြင့် ကောင်းမွန်စွာပြန်ကြည့်သည့်အချိန်မှာ ထိုအကျင့်ဓလေ့များသည် မာရ်နတ်၏ အုပ်စိုးမှုအောက်မှာ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တရားကို လိုက်မနာပြီး၊ အသက်ရှင်သည့်တစ်မျိုးသာဖြစ်သည်။ ယေရှု သည် စာတန်၏ အုပ်စိုးလိမ်ညာလှည့်စားခြင်းများ၊ နှိပ်စက်မှုအောက်တွင်ရှိသော ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်အတွင်း က ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ လောကဇာတိ ဓလေ့ထုံးစံများမှ ကင်းကွာအောင် ဖယ်ထုတ်လာရခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း လူတို့သည် မကင်းကွာချင်ပါ။ လူတို့သည် မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောကြောင့်၊ အလင်းထက် မှောင်မိုက်ကိုသာ၍ နှစ်သက်ကြ၏။ (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၃း၁၉) (က) ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခြင်း အယူအဆ (Evolution Theory) နှင့် သိပံ္ပအတတ်ပညာမတူညီသည့် အကြောင်း Evolution theory ဆိုသည့်စကားသည် “Evolution” သည် “evolve” ဆိုသည့်စကားမှ ဆင်းသက်ဖြစ်ပေါ်လာ သည်။ အဓိပ္ပါယ်သည် မည်သည့်အရာဝတ္တု တစ်စုံတစ်ခုမဆို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အခြားအရာတစ်ခုတို့ကို တဖြည်းဖြည်းခြင်း ပြောင်းလဲတတ်သည်ကို ဆိုလိုသည်။ “Theory” ဆိုသည့်စကားလုံးသည် အသေအချာမသိသော
7.6တစ်စုံတစ်ခုကို လိုက်လံရှာဖွယ်မေးမြန်းသည့်အချိန်တွင် ဟိုလို၊ ဒီလို ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အယူအဆပြီး အနက်ဖွင့်ဆိုသည့် စကားကိုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် Evolution Theory သည် လူတွေရဲ့ ထင်မြင်ယူဆသည့် တစ်မျိုးသာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ဖြစ် သလိုဖြစ်သော်လည်း၊ မဟုတ်မမှန် ပါ။ စာတန်၏ မမှန်ကန်သည့် ပညာတစ် ခုသာဖြစ်သည်။ Evolution Theory သည် ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်သော လောကပညာရှင် များက ထင်မြင်ယူဆသည့်အရာများ ကို မှန်ကန်သည့် သိပ္ပံအတတ်ပညာများ နဲ့ ပြန်လည်ထပ်ထည့်ပြီး ရောထွေးစေရန် သင်ကြားပို့ချသည့် တစ်မျိုးသာ ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- နှစ်ပေါင်း ၄.၅ သန်းအလွန်တွင် လူတို့သည် မျောက်မှတ ဖြည်းဖြည်း ဆင်းသက်ပြီး လူဖြစ်လာသည်ဟု ကွန်ပြူတာတွင် ဓာတ်ပုံများနှင့် ရုပ်ရှင်များကိုလည်း လုပ်ကြံဖန်တီးသည့်အရာများကို အမှန်တ ကယ်ဖြစ်သလို လုပ်ပြီး၊ လူတွေယုံကြည်လာအောင် လေ့စားသည့်အရာများဖြစ်သည်။ နှစ် ပေါင်း ၄.၅ သန်းတုန်းက အရာများကို ဘယ်သူမှ အသိအကျမသိနိုင်ပါ။ လူတို့စကားပြောသည့်အရာ များမှ ထင်မြင် ယူဆသောကြောင့် ပညာရှင်တွေပြောတာ မှန်ကုန်ကြောင်းကို ဆိုပြီး၊ လက်ခံ ယုံကြည်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သက် သေဖြစ်သူ နာဇီဟီသလာ သည် “လိမ်လည်သည့် စကားတစ်ခွန်းကို တိတ်ကြားရအောင် အကြိမ်ပေါင်း မြောက်များစွာ ထပ်သလဲလဲပြောဆိုလာသည့်အချိန်မှာ လူတွေယုံကြည်သည်” ဟု ပြောခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူ ယနေ့ Evolution Theory သည် လူတို့ကို လိမ်လည်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသင်းတော်အတွင်း မမှန်ကုန်သည့်သြ၀ါဒတွေ (False Doctrine) အချို့တို့သည် ထိုနည်းတူ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တွေ့မြင်ရသည်။ လူတိုင်းတရားဟောချက်များ တူသ လို အမြဲတမ်းဟောသောကြောင့် မှန်ကန်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆပြီး၊ ပြီးစလွယ်နားထောင်တတ်သည့် အချိန်လည်း ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Evolution Theory သည် စာတန်၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသွေးဆောင်သည့်၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ် ရန်လွယ်ကူသည့်၊ လူတို့လုပ်ထားသည့် ဘာသာရေး “Man-made religion” တစ်မျိုးသာဖြစ်သည်။ ရှေးတုန်းက ဟိုလို၊ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့သည်ကို ထင်မြင်ယူဆပြီး၊ လိုက်ပြောသည့်သူများကို “ယုံကြည်ရန် တစ်မျိုးသာ” ဖြစ်သည်။ သို့သော် စစ်မှန်သောသိပံ္ပပညာသည် ဘုရားသခင်ဆီမှ ဖြစ်လာပြီး၊ အမှန်တကယ်ရှိခြင်း၊ ဖြစ်ပျက်ခြင်း တစ်မျိုးဖြစ် သောကြောင့် စစ်မှန်သည့်ပညာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မည်သူမဆို သင်ယူလေ့လာနိုင်သောသိထိုက်သည့် လက်ခံရ မည့် ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခပ်သိမ်းသောအရာများကို ပြန်လည်လေ့လာသည့်အချိန်မှာ ဘုရားသခင်၏ အံ့သြ ဖွယ်သော ပညာအတွင်း ၀ှက်ထားသောအရာများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ထိုပညာရပ်များကို နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ လေ့လာသော်လည်း လေ့လာမကုန်နိုင်၊ အသိမကုန်နိုင်သည့်အရာများဖြစ် သည်။ မြန်မာပြည် ဂီတမှူးချစ်စမ်းမောင်ဆိုထားသည့် “လူသားဘို့ အသက်စွန့်ရှာသူ အကြောင်း” သီချင်းသည် စစ်မှန်သည့် အတတ်သိပ္ပံပညာအကြောင်းနှင့် Evolution အကြားကို အသေချာမခွဲခြားတတ်သည့် တစ်ယောက်ကရေးစပ်ထား သည့် သီချင်း ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာကို ကျနော်တို့ တိုက်ခိုက်ရန်အကြောင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ တိုက်ခိုက်လျှင် ပညာ ပေးသည့် ထာဝရဘုရားကို တိုက်ခိုက်တာနဲ့အတူဖြစ်သည်။ စာတန်၏ Evolution လုပ်ငန်းများကို လိုက်လံရှာဖွယ်၍၊ စစ်မှန်သည့်အရာများကို ခွဲခြားတတ်ပြီး၊ တိုက်ခိုက်ရန်သာ ကြိုးစားရမည်။
8.7၆။ ကမ္ဘာ့လူသားတွေ ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသည့် (Evolution) နောက်သို့လိုက်ခြင်း ပညာရှိများပြောသည်ဟုဆိုပြီး ကမ္ဘာ့လူသားတွေအများပိုင်းက Evolution ၏ သင်ကြားမှုကို ယုံလွယ်ပြီး လက်ခံ ယုံကြည်ကြသည်။ လူအများပိုင်းက လက်ခံယုံကြည်လို့ မှန်တာကြီးပဲ မဟုတ်ပါ။ Evolution ပြောင်းပြန် ပညတ်တရားသည် ဘုရားသခင်ကို မသိခိုင်း၊ မကိုးကွယ်ခိုင်းပါ။ ထို့အပြင် လူသားအချင်းချင်း လည်း ရိုသေလေးစားရမှန်ကို မမြင်ခိုင်းပါ။ Evolution ကို ယုံကြည်သောသူတစ်ယောက်သည် စာတန်စကား ကို နားထောင်သောကြောင့် လူတွေအသက်ရှင်ခြင်းဟာ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပဲ မျောက်တွေလို တိရစ္ဆာန်တွေ လိုသာမြင်ပါသည်။ လူခန္ဓာသေဆုံးပြီးနောက် နောင်ဘ၀ဆိုတာမရှိပဲ ဘဝပြီးဆုံးကြောင်းကို ယုံကြည်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ယုံကြည်ခံယူခြင်းမှ Evolution ကို ယုံကြည်သောသူတစ်ယောက်သည် စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် လျှင် စိတ်ဆိုးစိတ်တိုဖြစ်လာသည့်အခါ သူတပါးကိုပင် သတ်ရဲလာပြီး၊ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေတတ်လာသည်။ Evolution သင်ကြားပို့ချပေးသည့် ကျောင်းတွင်လည်း ကလေးတွေက သူငယ်ချင်းတွေကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ပြီး သို့မဟုတ် မိဘတွေကို သတ်ပစ်လိုက်တာမြှောက်များစွာသော အမှုများရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်မြူနစ်များသည် လူပေါင်း၊ သိန်း သန်းချီသော လူများကို သတ်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လူတွေကို ကျွန်ဖြင့်ရောင်းစားခြင်း၊ လူတွေကို နှိ်ပ်စက်နှောက်ယှက်ခြင်း၊ အမျုိးသားရေးခွဲခြားပြီး သတ် ဖြတ်လိမ်ညာခြင်း၊ ကိုယ့်လူမျိုးစွဲပြီး ကိုယ့်အမျိုးကိုပဲချစ်ခြင်း၊ မိမိဂုဏ်ကိုပဲရှာခြင်း၊ ဇာတိတိုးတက်ဘို့သာ စဉ်းစား ခြင်း၊ အာဏာရာထူးကိုပဲ လောဘကြီးခြင်း၊ လောကနှင့် ငွေကိုပဲ ချစ်ပြီး လိုက်ရှာခြင်း၊ နှိပ်စက်အုပ်စိုးခြင်းခံရသော အရာများဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာတွေကြောင့် ကမ္ဘာစစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Evolution စိတ်သဘောထားသည် ပညာရှိသောနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်သည့် လူတွေမှာ ပို၍ရှိသည်ကို မြင်ရသည်။ Evolution သတင်းများသည် မိုင်းဖြင့်ပစ်လိုက်သလို ဖြိုခွဲနေသည့်အကြားတွင် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရသည်။ ထို့ကြောင့် အနောက်နိုင်ငံအများစုသည် ဘုရားဟူသော စကားကို မယုံကြည်ပဲ မလိုက်ပါ။ Individualistic တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်သောဟု ခေါ်သည့် ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျလိုက်ပြီး အသက်ရှင်နေထိုင်သောသူအများပိုင်း ဖြစ်ကြသည်။ ကိုယ် ကြိုက်သလိုသာ နေထိုင်သည်။ လူအများပိုင်းသည် “ခွန်းအားဗလကြီးသောသူများက ခွန်းအားနည်းသောသူများကို အုပ်စိုးခြင်း” စိတ်နေသဘောထားများသာ ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် White Supremacy ဟူသည့် အသားဖြူများသာ အုပ်စိုးရမည်ဆိုသည့် စိတ်ဓာတ်ထည့်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်မမှန်သည့် Evolution ၏ သတင်းများကြောင့် လူတွေဟာ တိရစ္ဆာန်လို ဖြစ်လာသလိုဖြစ်သည်။ မိသားစု၊ ဇနီးမောင်နှံတွေအကြားလည်း ကွဲပြီး၊ မိဘမဲ့သားသမီးများ သည် ကိုယ့်မိဘကိုတောင်မသိသော ကလေးများပို၍ များလာသည်။ ၇။ အသင်းတော်များ ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသည့် (Evolution) နောက်သို့လိုက်ခြင်း တိတ်ကို စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တာက ယနေ့အသင်းတော်အများပိုင်းသည် Evolution က သင်ကြားပို့ချသည့် ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်အောက်တွင် အတိအကျလိုက်နာနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ပင် ဖြစ်သည်။ မည်ကဲ့ သို့ ဖြစ်သလဲ။
9. 8 (က) လူအများနောက်သို့ မလိုက်မိစေရန် ယနေ့ ကမ္ဘာ့လူသားအများပိုင်းသည် ပညာရှိများပြောသည့်စကားများကို ဟုတ်မှန်သလိုထင်ပြီး လိုက်နာလက်ခံ၍ ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ၀ိညာဉ် ရေးရာလမ်းတွင် ပျောက်ဆုံးရသည့် အကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ ယေရှုကို ယုံကြည်ကြသောသူများတွင် အချို့သောသူများက လူအများပိုင်း လိုက်သည့်ဖက်သို့ နောက်လိုက်လုပ်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ ဘုရားနှုတ် ကပတ်တော်နှင့် ဤအမှန်အကန်သွားနေခြင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို မခွဲခြားတတ် တော့ဘူး။ အများပိုင်းက အတင်းလက်ခံလို့၊ အရင်တုန်းကအတိုင်း ယုံကြည် လို့ မှန်သည်ဟု ထင်ပြီးလျှောက်နေသည်။ အင်မတန်မှ ကြောက်စရာ ကောင်းသည့်လမ်းနောက်သို့ လျှောက်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သွန် သင်ခဲ့သည့် အရာများတွင် ဘုရားသားသမီးများသည် အများပိုင်းလိုက်နေသည့်လမ်းနောက်သို့ မလိုက်ရန်နှင့် ကျယ်သောတံခါးဝထဲတွင် မ၀င်စေရန်၊ ကျယ်သောလမ်းနောက်သို့ မလိုက်ရန်ဟူသော အချက်များဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံကို အနည်းကျဉ်းအားဖြင့် ၀င်ရလိမ့် မည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် သတိဝိရိယရှိစွာဖြင့် ကျဉ်းသော လမ်းဖြစ်သော လူအနည်းစုဖက်သို့လိုက်ပြီး၊ ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကို လျှောက်လှမ်းရမည်။ အချို့သောယုံကြည်သူများသည် Evolution အားဖြင့် သင်ကြားသည့်အရာကို ယုံကြည်လက်ခံသောကြောင့် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သင်ကြားသည့် ဤကမ္ဘာကြီးသည် နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ထောင်ရှိသည်ကို အယုံအကြည်မရှိ၊ မဟုတ်မမှန်ကြောင်းကို စဉ်းစားတွေးခေါ်နေသောသူ အများပိုင်းရှိသည်။ (ခ) အသင်းတော်သမိုင်းနောက်သို့မလိုက်ရန် အသင်းတော်များသည် သခင်ယေရှုသင်ကြားပေးခဲ့သည့် စကားတစ်ခွန်းတိုင်းကို နားလည်သဘောပေါက် လိုက်နာ ရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရမည့်အစား၊ အသင်းတော် သမိုင်းနောက်သို့ လိုက်နေသောသူအများပိုင်းရှိသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ အသင်း တော်သမိုင်းနောက်လိုက်ခြင်းဟူသော စကားသည် “တမန်တော် ခေတ်မှစ၍ ယနေ့ထိ တိုင်အောင် အသင်းတော်များ ဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့သည့်အကြောင်းကို ဖတ်ပြီး ၊ ထိုကနဦး အချိန်တုန်းက ယုံကြည်သူများ ဘယ်လိုဘုရားသခင်လမ်းသို့ လိုက် လျှောက်ခဲ့သူများ နောက်ဆီ လျှောက်လှမ်းခြင်းကို ဆိုလိုချင်သည်။” ဥပမာ- အေဒီ ၁ဝဝ၊ ၅၀၀၊ ၆၀၀ နှစ်တုန်းက ဟိုပုဂ္ဂိုလ်က ဒီလူက ဟိုလိုဒီလိုပြောခဲ့သည်ဟု ဆိုပြီး သူတို့လိုက်လုပ်ခဲ့သလို အတုယူနောက်သို့ ကြိုးစားလိုက်လျှောက်နေသူများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အမြင်သည် ထိုကဲ့သို့ အတုယူလိုက် လျှောက်ခြင်းသည် ပျောက်ဆုံးသောလမ်း သို့ လျှောက်နေခြင်းဖြစ်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသင်းတော်သည် တမန်တော်အချိန်တုန်းက ၀ိညာဉ်တော်မီးအရမ်း တောက်လောင်ပြီး၊ နောက်တစ်ခေတ်တွင် ပြေပျောက်သွားခဲ့သည်။ အချိန်ဖြည်းဖြည်းကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ိညာဉ်တော်မီးတောက် လောင်မှုသည် တဖြည်းဖြည်းပြေပျောက်ငြိမ်းသွားခဲ့သည်။ အသင်းတော်များသည် နက်နဲသောအမှောင်ထဲသို့ ၀င်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့သည် ဘုရား သခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် သန့်ရှင်းသောနှုတ်ကပတ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စ်ီတိုင်း လက်ထဲတွင် လက်ခံရရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၀ိညာဉ်တော်မီးငြိမ်းခဲ့သည့်ခေတ်တုန်းက လူတွေရဲ့ခြေရာနောက်သို့ လိုက်လျှောက်ရမည့်အစား၊ သခင်ယေရှုမည်ကဲ့သို့သင်ကြားပေးခဲ့သည်များကို လေ့လာ ပြုစုပြီး ကြိုးစားလိုက် လျှောက်ရမည်။ ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်သည်လည်း ကနဦးတုန်းက ဝိညာဉ်တော်ခွန်အားဖြင့်
10.9အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်း များကို လုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဖြည်းဖြည်းငြိမ်းသွားခဲ့သလို ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- တိမောသေ လိုဖျားနေသောသူများကိုအပြင် အနာငြိမ်းမ ပြုနိုင်ခဲ့ပါ။ ထို့အပြင် ဝိုင်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ် ရန်သာ သတိပေး သောအရာများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ရှေးတုန်းက ရေးထားခဲ့သည့် မူရင်းစာပေများဖြစ်သော ဟေဗြဲစာ၊ ဂရိစာနှင့် လက်တင်(ဒ်) စာပေများ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်များကို သိအောင်လေ့လာခြင်းသည် ကောင်းပါ၏။ သို့သော် ထိုကဲ့သို့ လေ့လာခြင်းထက် ဘုရား သခင် သင်ကြားပေးထားသည့် စကားတစ်ခွန်းခြင်းဆီတိုင်းကို လက်ခံ၍ ကြိုးစားလိုက်လျှောက်ရန် သာ၍ဖြစ်သင့် သည်။ ထိုကဲ့သို့မဟုတ်လျှင် စာပေတစ်လုံးခြင်းဆီတိုင်းရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်နှင့် သမိုင်းကြောင်းများကိုသာ သိကျွမ်း ပြီး၊ ဝိညာဉ်ရေးရာလမ်းတွင် နောက်ကျကျန်ရစ်သောသူများဖြစ်အောင် ခိုးယူခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ (ဂ) မမှန်ကန်သော သင်ကြားမှုများကို လက်ခံခြင်း ထို့အပြင် အသင်းတော်အတွင်း (New Age) နှင့် အခြား ဟိုနေရာ၊ ဒီနေရာက မမှန်ကန်သောသင်ကြားမှုများကို လက်ခံမှုများစွာရှိလာသည်။ ဥပမာ -“Yoga” ယောဂ ဟုခေါ်သည့် ကျန်းမာသန်စွမ်းရန်အတွက် ခြေ၊လက်၊ အာရုံတွေ့အောင် သင်ကြားခြင်းနှင့် ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် မဟုတ်ပဲ၊ ၀ိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့် သင်ကြားမှုများကိုလည်း အသင်းတော်အတွင်းလက်ခံ၍ ၀င်ခိုင်း သည်။ ယောဂ (Yoga) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရှိသော ဟိန္ဒူနတ်ဆရာများကသာ လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်သည့် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး၊ အနောက်နိုင်ငံအသင်းတော်များ အတွင်း ထိုယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများကို သင်ယူလေ့ကျင့်ရန် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိ လာသည်။ အရင်တုန်းက ကျနော်တို့သွားပါဝင်သည့် အသင်းတော်တစ်ခုတွင် ဆရာကိုယ်တိုင်က New Age ပညတ်တရားတွေ သင်ကြားပို့ကျလာသောကြောင့် ကျနော်အမှန်တကယ်အံ့သြခဲ့ပါသည်။ ထိုဆရာပြောသည့်အချက်မှာ “တစ်ခုခုကို စွဲလန်းတာ (သို့) အကျင့်ဆိုးတစ်ခုခုကို ၂၁ ရက်အထိ ဆက်တိုက်မလုပ်ပဲနားနေမယ်ဆိုရင် ထိုအကျင့်ဆိုး၊ စွဲလန်းမှု များ ပပျောက်သွားမည်” ဟု ပြောသည်။ ဟုတ်ရင်လည်း ဟုတ်လိမ့်မည်။ သို့သော် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် မသင် ကြားပါ။ ဘုရားသခင်၏ ကူညီမှုသည် ၂၁ ရက်အထိ စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုပါ။ ၂၁ ရက်ထိတောင် အကျင့်ဆိုးများကို ကိုယ်ကိုနှိပ်စက်ပြီး စွန့်ပစ်လိုက်သော်လည်း၊ ထိုအကျင့်ဆိုးများသည် ပြန်လည်နှစ်ကိုယ်အတိုင်းလုပ်ချင်သည့် စိတ် ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုနည်းလမ်းများစတင်လုပ်ဆောင်လာသော မာရ်နတ်၏ဝိညာဉ် ဆိုးကို မမောင်းထုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ဃ) ဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်တွေကို မခွဲခြားတတ်ခြင်း မိတ်ဆွေ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအစသည် စာတန်အားဖြင့် ကျနော်တို့ကို မျက်ကန်းအောင်လုပ်ဆောင်သော ကြောင့်၊ မမှန်ကန်သည့် ၀ိညာဉ်ဆိုးနှင့် စစ်မှန်သည့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လုပ်ဆောင်မှုများကို မခွဲခြားတတ် အောင် ဖြစ်လာသည်။ ဥပမာ- ဘုရားသခင်သည်လည်း အံ့သြဖွယ်န်ိမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့၊
11. 10 စာတန်မာရ်နတ်သည်လည်း ထိုနည်းတိုင်း လိုက်လုပ်ပြီး အနာငြိမ်းခြင်းများလုပ်ဆောင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင် ချက်များကို မခွဲခြားတတ်သောကြောင့် မျက်ကန်းဖြင့် ယုံကြည်လက်ခံလွယ်ခြင်းများရှိသည်။ လုံးဝကို လက်မခံနေ သောသူများလည်းရှိသည်။ ထိုအရာများကို ခွဲခြားတတ်လာအောင် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၊ နှုတ်ကပတ်တော်မီးအားဖြင့် အလင်းထွန်းလင်းမှ သာခွဲခြား တတ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကူညီမစခြင်းမရှိလျှင် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်သည့် အရာများကိုလည်း စာတန်၏ လုပ်ငန်း များလို မြင်တတ်လာပါသည်။ ဖာရိရှဲများသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ လုပ်ငန်းများကို ပြောင်းပြန် မြင်ခဲ့သည်။ (င) ၀ိညာဉ်ရေးရာလမ်းတွင်လည်း ဘုရားသခင်ကိုမသိသောသူများဦးဆောင်သလို ဦးဆောင်ခြင်း ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်လမ်းအောက်တွင် ၀ိညာဉ်ရေးရာလမ်းကို ဦးဆောင်ရာတွင်လည်း ကိုယ်ခန္ဓာရေးရာ ဦးဆောင်သလို ထပ်တူထပ်မျှ ဦးဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာတတ်များ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူများ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ရေး (ဇာတိရေးရာ)မှာ နာမည်ကြီးသူများ၊ ဂုဏ်အသရေရှိသူများ၊ အရည်အချင်းရှိသောသူများ၊ စကားကိုချဲ့အောင် ပြောတတ်သူများ၊ နိုင်ငံခြားထောက်ပံ့ကြေးရှိသောသူများ၊ လူကြီး (သို့) ဆရာသားသမီးတွေသာ ခေါင်းဆောင်လုပ် သင့်တယ်လို့ ပြောကြသည်။ သူတို့စကားကို နားထောင်ပေးပါ။ ကျနော်တို့ ဦးဆောင်မယ်လို့ ပြောကြသည်။ အမှန် တကယ် နှုတ်ကပတ်တော်သည် ထိုနည်းတူ သင်ပေးသလား။ ထိုကဲ့သို့ မသင်ကြားပါ။ ဘုရားသခင်ပြောသည့် အရာသည် ဘုရားကိုမသိသောသူများသာလျှင် ထိုနည်းတူ ဦးဆောင်ကြသည်။ ဘုရားသားသမီးများသည် ထိုနည်း တူမလုပ်သင့်ပါ။ (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀း ၂၅-၂၈) ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်အတွင်းတွင် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ဆောင်ရန် ကျမ်းစာသင်ကျောင်း၊ ဒီဂရီဘွဲ့နာမတစ်ခု ခုပြီးမြောက်မှ အမှုတော်ဆောင်ရမယ်လို့ ပြောကြသည်။ ထိုနည်းတူ အမှန်တကယ်ပင် ဘုရားသခင် လမ်းညွန်ခဲ့သ လား။ ယခုလို ဆိုလိုခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သင်စရာမလိုဘူးလို့ ပြောချင်တာမဟုတ်ပါ။ သာ၍ အယောက်ခြင်းဆီတိုင်းသည် ကျမ်းစာသင်ကျောင်းတက်ရန် ခွန်အားပေးချင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် “နှုတ်ကပတ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ခြေရှေ့မှာ မီးခွက်ဖြစ်၍ အကျွန်ုပ်လမ်းခရီးကို လင်းစေပါ၏၊၊” (ဆာလံ ၁၁၉း၁၀၅ ) ကျမ်းစာသင်ကျောင်းပြီးလို့ ဘုရားအမှုတော်ကိုမဆောင်မနေရဟု မဆိုလိုပါ။ ဘုရားသခင်ခန့်အပ်သော မည်သည့် လုပ်ငန်းမဆို ဘုရားသခင်ကို အစေခံပြီး၊ စိတ်ငြိမ်သက်စွာ ပါဝင်ဆက်ကပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ချက်သည် ဘုရားအမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ ကိုယ်ပြောသလို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ၊ အလိုကျ၊ မိဘက အတင်းတိုက်တွန်းလို့ လုပ်ရကောင်းသည့် အလုပ်မဟုတ်ပါ။ အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတစ်မျိုးလို လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ပိုင်ရှင်က ရွေးချယ်သောသူ၊ ခွဲခန့်အပ်သည့် လုပ်ငန်းတွင် စိတ်ငြိမ်သက်စွာ ကြိုးစားပါဝင်ဆက်ကပ်လုပ်ဆောင်ရမည်။ သူ့အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းသင့်သည်။ ကိုယ့်အချိန်တွင် မလုပ်ဆောင် သင့်ပါ။ ခေါ်ခြင်းမရှိရင်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှလို့ရသည်။ သို့သော် ဘုရား သခင်၏စေလွတ်ခြင်းမရှိခဲ့ရင် စာတန်အနိုင်ထက် သွေးဆောင်နိုင်သည်။ တမန်တော် ၁၉ ယောက်တွင် ယဇ်ပရော ဟိတ် စခါဝါ၏သား ၇ ယောက်လို “တစ်ရက်တည်းတွင်” စာတန် မာရ်နတ်ဖမ်းမိခြင်းခံခဲ့သလို ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ ကူညီမစမည့် ဂတိတော်စကားများသည် ကိုယ်တော်စိတ်သဘောကို အတိအကျလိုက်နာသော သူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ကိုယ်စိတ်တိုင်းပဲ လိုက်နာလုပ်ဆောင်သောသူများအတွက် မဟုတ်ပါ။ စိတ်နှလုံး အကျင့်စရိတ္တများမကောင်း၊ မသန့်သောသူတစ်ယောက်အတွက် ခွန်အားအကြီှးမားဆုံးသော သခင်ယေရှုနာမည်ကို ဘယ်လောက်ပဲကျယ်လောင်စွာအော်သော်လည်း အလာကား ဖြစ်သည်။ “ကိုယ်တော် ဂတိတော်များကိုမလိုက် သော သူတစ်ယောက်၏အော်သောအသံသည် ကိုယ်ပဲကြားရသည်။ အခြားသောသူများလည်း ကြားနိုင်သည်။ စာတန်လည်း ကြားသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က နားမထောင်ဘူးလို့” တီဗီ ယောရူ (TB Joshua) ပြောသလိုဖြစ် သည်။ အမှန်တကယ် ဟုတ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်မြတ်သည် ကိုယ်တော်စေလွတ်ခြင်းမရှိလျှင် အင်မ
12. 11 တန်မှ ကြောက်စရာကောင်းသော လုပ်ငန်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စစ်မြေပြင်သို့သွားနေခြင်းဖြစ်သည်။ မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော မာရ်နတ်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနဲ့ တန်ပြိုင်တိုက်လှန်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေ ဤအရာကို ခရစ်ယာန်များ သည် အလေးအနက်မစဉ်းစားပဲ ဖြစ်နေသည်။ ထို့အပြင် ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်အတွင်း ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကို လောကပညာတစ်မျိုးလို သင်ယူလေ့လာ ခြင်းဖြစ် လာသည်။ မယုံကြည်သောသူတစ်ယောက်သည်လည်း သင်ယူလေ့လာနိုင်သည်။ ကျမ်းစာကျောင်းများ လည်း ကမ္ဘာ့ပညာရေးနှင့်ဆိုင်သော (Academic) ပညာရေးကျောင်းလို ဒီဂရီဘွဲ့တွေရဘို့၊ ဂုဏ်ဘွဲ့တွေရဘို့ပဲ ဖြစ် လာသည်။ ထို့အပြင် အသင်းတော်လုပ်ငန်းများလည်း စားဝတ်နေရေးအတွက် အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုလို၊ ကုမ္ပဏီလို၊ အဖွဲ့စည်းတစ်ခုလို လုပ်ဆောင်လာသည်။ ယဉ်ကျေးမှုလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ်ရင် မိမိဒေသ၊ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် လုပ်ဆောင်သော အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများသာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် အသင်း တော်များကို ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်လမ်းသို့ ဦးဆောင်၍ လျှောက်လှမ်းခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံတွင် အမှုတော်မြတ် (Ministry) တစ်ခုတွင် တစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ သည်။ သူတို့နဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ရန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနဲ့ အသက်တာအကြောင်းကို အသေးစိတ်မေး မြန်းလေ့ရှိသည်။ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာသင်ထားသည့် အချက်အလက်များဟုတ်မဟုတ်အကြောင်းကို မေးမြန်းသည်။ ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများအကြောင်းအရာများကို မမေးမြန်းသလောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သူတို့၏ ပညာအရေးချင်းအဆင့်တန်းမမှီနိုင်ပါက ကျွန်ုပ်ကို ဘုရားသခင်က ခေါ်ခြင်းခံရတယ်လို့ ပြောရင်တောင် လက်ခံနိုင် စွမ်းမရှိပါ။ ဆရာတစ်ဦးပြောသည့်အရာက အသင်းတော်တစ်ခုတွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတစ်ယောက်မဟုတ်လျှင်၊ ပညာတတ် သူတစ်ဦးလာတက်ရင်၊ တိတ်မကြာခင်မှာပြင် အသင်းတော်လူကြီးနေရာသို့ အသင်းထောက်လူကြီးနေရာကို ခန့် အပ်ပေးသည်။ ချက်ချင်းပင် တရားဟောခိုင်းခြင်း အချိန်ပေးလျှက်ရှိသည်။ အမှန်တကယ်ပင် ဟုတ်သည်။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်အသုံးပြုခံသော သူဟုတ်မဟုတ်ကို မကြည့်နိုင်ပါ။ ကြည့်လည်း မကြည့်တတ်ပါ။ ခန္ဓာရေးရာ ကိုကြည့်ပြီး အတင်းကပ်နေသလိုပင် ဖြစ်နေသည်။ (စ) အပြစ်နှင့် စာတန်လူကို မခွဲခြားတတ်သည့်အကြောင်း စာတန်သည် အပြစ်၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်ရှိရာ၌ စာတန်နှင့် မကောင်းဆိုးဝါးနတ်၊ ဝိညာဉ်ဆိုးများ နှင့် အတူရှိသည်။ အပြစ်မရှိသောအရပ်တွင် စာတန်လည်းမနေပါ။ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်၏ အုပ်စိုးရာအတွင်း၌ အပြစ်ကိုဖုံးလွမ်းသောကြောင့် အပြစ်ကိုမခွဲခြားတတ်ပါ။ မာရ်နတ်ဝိညာဉ်ဆိုးနှင့် ဘုရားသခင်၏၀ိညာဉ်များကိုပင် မခွဲခြားနိုင်အောင်လုပ်သည်။ အပြစ်တစ်ခုကို ကျူးလွန်မိသော်လည်း မာရ်နတ်လုပ်ဆောင်သောအရာဖြစ်သည်ကို မသိခိုင်း၊ မမြင်ခိုင်းစေပါ။ ထိုကဲ့သို့အဖြစ်မှ ကိုယ်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်လျှင် အခြားသူများနှင့် အခြား အရာများအပေါ် အပြစ်ရှာပြီး အပြစ်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် စာတန်၏ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်၏ အုပ်စိုးမှုအတွင်းမှ ကယ်တင်ရန်လာပြီး၊ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်မှ ပြောင်းပြန်လမ်းကို မရွေးချယ်မိစေရန် သွန်သင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ စာတန်သည် ကမ္ဘာဦးအစက အပြစ်လုပ်သောသူ၊ အပြစ်၏အရင်း အမြစ် ဖြစ်သည်။ (၁-ယောဟန် ၃း ၇-၁၀). စာတန်သည် ထိုကဲ့သို့ ဖုံးကွယ်ဝှက်ထားခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အထဲမှာ အလုပ်လုပ်သောကြောင့်၊ မိမိအပြစ်ကို ၀န်ခံလာသည့်အချိန်မှာ ၀ိညာဉ်တော်အထဲ၌ စာတန်နှင့် မာရ်နတ်ဝိညာဉ် ဆိုးများ၏ အပြစ်လုပ်ရပ်များကိုထုတ်ဖော်ခြင်း တစ်မျိုးဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားသားသမီးများဖြစ်စေရန်အတွက် အပြစ်ကိုဝန်ခံစေရန် သွန်သင်ခဲ့သည်။
13. 12 (ဆ) ယုံကြည်ခြင်း (Faith) နှင့် ၀ိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံခြင်း (Anointing) ကို မခွဲခြားတတ်အောင်လုပ်ခြင်း ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်တွင် ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်ဖြင့်သာ ပြီးခိုင်းစေသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တဇံခံ ခြင်း (anointing) ဘိသိက်ခြင်းအဆင့်ထိမရောက်အောင် တားမြစ်ထားပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ထံ မှလာသော ၀ိညာဉ်ဆုကျေးဇူးဖြစ်သောကြောင့် ယုံကြည်သူအယောက်ချင်းဆီတိုင်းက ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ကယ် တင်ခြင်း မရရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် ယုံကြည်ခြင်းသည် အင်မတန်အရေးကြီးဆုံးသောအရာ ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ၀ိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံခံခြင်း (Baptism in the Holy Spirit) ထိုနှစ်ချက်မည်ကဲ့သို့ မတူညီ ကြောင်းကို လေ့လာကြစို့။ ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ လူမျိုးတိုင်း၊ ဘာသာတရားတိုင်းကို ကိုင်းရှိုင်းသောသူများတွင် ရှိသော ယုံကြည်ခြင်း တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်များတွင်လည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် အခြားသူများ၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မတူညီပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသူများ၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် မာရ်နတ်နှင့် ဝိညာဉ်ဆိုးများဖြစ်သော နတ်များ၊ အခြားရုပ်တုဆင်းတုအရာများနှင့် လူပုဂ္ဂုိလ်များကို ယုံကြည်ကိုးစားကြသည်။ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်တွင် စာတန် သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူများကို ဘုရားမသိသောသူများ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့် လွှဲမှားသွားအောင်လုပ်ပြီး၊ ထိုကဲ့သို့ ဘုရားမသိသူများက သူကိုယ်တိုင်ဘုရားများကို ရွေးချယ်သလိုပင် သခင်ယေရှုကိုလည်း ရွေးချယ်ပြီး ကိုး ကွယ်ခိုင်းစေသည်။ ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုကို အဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ပြီး ယုံကြည်ကိုးစားသလဲကို မသိလောက် အောင်ကို မျက်စိကန်းစေခိုင်းသည့်အရာဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများတွင် ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏၀ိညာဉ်တော် “ဆုကျေးဇူး” တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ိညာဉ်တော် ၌ ဗတ္တိဇံရခြင်းဖြစ်သည်။ (Baptism in the Holy Spirit) ဟူသည်မှာ သမ္မာဟောင်းခေတ်တွင် ဆီဖြင့် သွန်း လောင်းခြင်း (Anointing)နှင့် အတူပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ယုံကြည်သူတစ်ဦး၌ ကျိန်း ဝပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝစေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်၏ အောင်မြင်ခြင်း ခွန်အားဝတ်လုံကို ခြုံပေးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ပြည့်ဝစေခြင်းသည် ယုံကြည် ခြင်းဆုကျေးဇူးထက်ကြီးမားသော ဆုကျေးဇူးတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဝိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံယူ ထားသော သူအထဲတွင် သခင်ယေရှု ကိုယ်တော်တိုင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျိန်းဝပ်လျှက်၊ ထိုသူ အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားလာသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် လောင်းကစားတစ်ခုလို ခိုင်းနှိုင်းလို့ရသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဆုတောင်းလာသည့်အခါ ယုံကြည်ခြင်း ဘယ်လောက်ကြီးမားလဲ၊ မကြီးမားလဲဆိုတာ သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်ဆုတောင်းသည့်စကားကို ဘုရား သခင်ဖွင့်ပြလျှက်ရှိသည်။ ယုံကြည်ခြင်းမပြည့်ဝပဲ ဆုတောင်းလျှင် မည်သည့်အရာမှ မဖြစ်လာနိုင်ပါ။ ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ဆောင်သူတစ်ယောက်၏ ဆုတောင်းပြီးသည့်အခါ၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော် အတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ မျှသာပြောတတ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားသောသူသည် ကြီးမားသောလုပ်ငန်းများကို လုပ်နိုင်သောကြောင့်၊ ဘုန်းတော်ချီးမြောက်ခြင်းများသည် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ၅၀%၊ ဘုရားသခင်က ၅၀% လုပ်သလိုဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော် ဝိညာဉ်တော်၏ဘိသိက်သောအဆင့်သည် ယုံကြည်ခြင်းရပြီးထားသည့်အပေါ် ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်း သော ဝိညာဉ်တော်သည် ထိုသူအတွင်း၌ ပြည့်ဝအောင်ကျိန်းဝပ်လာလိမ့်မည်။ ထိုသူသည် ဝိညာဉ်တော်မပြည့်ဝ သောသူများ၏ မလုပ်နိုင်သောအလုပ်များကို လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ထိုသူ၏ လုပ်ဆောင်သောအရာမှန်သမျှသည် ထိုသူကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ခြင်း မဟုတ်သောကြောင့် သခင်ယေရှုနာမတော်ကိုသာ ၁၀၀% ချီးမြောက်လာလ လိမ့်မည်။ ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝသောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အလုပ်လုပ်သောသူလို ဘုရားသခင်အလိုတော်
14. 13 တိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမတောင်း၊ အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဘုရားသခင် ဤကဲ့သို့ပြောတယ်၊ ထို့ကြောင့် ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဟု အလုပ်လုပ်လျှက်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်ဆီမှ တိုက်ရိုက်ပြခြင်း၊ ပြောပြခြင်းများကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် အစဉ်အဆက်သွယ်ရှိပြီး အတူအလုပ်လုပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်အတွင်းတွင် ယုံကြည်သူများကို ယုံကြည်ခြင်းအဆင့်မျှသာရှိရန် တားမြစ်သောကြောင့် အသင်းတော်အများပိုင်းသည် ဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်အဆင့်ထိ မရောက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ကိုယ် တိုင်မြင်သည်။ စာတန်သည် ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများကို ယုံကြည်သူများတွင်မရှိနိုင်အောင် အင်မတန်တားမြစ်ရန် ကြိုး စားသည်။ တမန်တော်ပေါလုသည် ၁-ကောရိန္တုသြ၀ါဒစာ ၁၄း၁ “ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတို့ကို အလွန်အလိုရှိသည်တွင်၊ ပရောဖက်ပြုရသောအခွင့်ကို သာ၍လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလော့။” ပြောထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဝိညာဉ်ရေးရာလမ်း တွင်သာ၍ ကြိုးစားပြီး အချင်းချင်းဝိညာဉ်ရေးရာ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိရောက်အောင် နေ့ရက်တိုင်း ကြိုးစားလုပ် ဆောင်ရမည်။ (ဇ) ခန္ဓာရေးရာကိုပဲ မြင်နိုင်ခြင်း နောက်ပြီး ပညတ်တရား ပြောင်းပြန်အောက်တွင် လူတွေရွေးချယ်မှုဖြစ်လျှင် လူ့အမြင်သည် ဒီလူကစကားနား ထောင်လို့ လူကောင်းဖြစ်တယ်။ ဟိုတစ်ယောက် စကားနားမထောင်လို့ လူကောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ ခွဲခြားပြီး လူ ကောင်းလို့ ထင်မြင်တဲ့သူများကို လက်ခံကြပါသည်။ တစ်ခါတုန်းက ရေဒီယိုလေလှိုင်းမှာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု အကြောင်းနားထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာ့စစ်တွင် ဆင်းရဲသားများ၊ ဒုက္ခသည်များလမ်းပေါ်တွင်အိပ်ပြီး ဆင်းရဲ စွာနေသည့်အချိန်မှာ အသင်းတော်တစ်ပါးသည် အားလုံးကိုစုဆောင်းပြီး ပညာသင်ခိုင်းရန်အတွက် ဘော်ဒါ အဆောင်မှာထားရန်ရွေးချယ်သည့်အချိန်မှာ လူကြီးတစ်ယောက်က ကလေးတစ်ယောက်ကို ဒီကလေးက လူ ကောင်းဟုတ်တယ်။ ဒါကြောင့် လမ်းပေါ်အိပ်ပြီး သူတောင်းစားတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ပြောကူညီခဲ့သည်။ ဤ အကြောင်းအရာကို ကျနော်ကြားသည့်အခါ ချက်ချင်းပင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ လွှဲမှားစွာ အလုပ်လုပ် နေသည့်လုပ်ရပ်များကို ချက်ချင်းပြောပြလာပါသည်။ အမှန်တကယ်ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတွေရဲ့အပြင်သဏ္ဌာန်ကိုကြည့်ပြီး ရွေးချယ်လျှက်ရှိသည်။ မလှဘူး၊ အကျင့် စာရိတ္တမကောင်းဘူး၊ Talent ဆုကျေးဇူး (ပါရမီ) မရှိတဲ့ သူများကို ခွဲခြားဆက်ဆံလျှက်ရှိသည်။ သို့သော် ယေရှု လက်ခံခဲ့သလို ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့် လက်ခံတာဘယ်နှစ်ယောက်များရှိသလဲ။ ဇာတိ(ခန္ဓာ)အရကြည့်လျှင် မှန်သလိုပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် နှုတ်ကပတ်တော်သည် ထိုကဲ့သို့ မသင်ပါ။ ယေရှုကြွလာခြင်းသည် ဖျားနာနေသော သူများပျောက်ကင်းစေရန်၊ အပြစ်ရှိသောသူများကို အပြစ်လွတ်ပေးရန်၊ လူတွေအထင်သေး၊ အပယ်ခံသောသူများ ကို မြင့်တင်ပေးရန်၊ ထောင်ကျသောသူများ လွတ်မြောက်စေရန်၊ နှိပ်စက်ညုင်းပန်းခြင်းခံသောသူများ၏ ဝန်များ ချွတ်ပေးရန်၊ မျက်ကန်းသောသူများ မျက်မြင်စေရန်၊ စကားအ နေသောသူများ စကားပြောနိုင်စေရန် ကြွလာခြင်းဖြစ် သည်ဟု ပြောသည်။ (ရှင်လုကာ ၄း ၁၈-၁၉) အမှန်တကယ် ဒုက္ခဆင်းရဲနွမ်းပါးမသန်မစွမ်းသူများကို လိုက်လံရှာ ဖွေပြီး သခင်ယေရှုနာမတော်အားဖြင့် ဆုတောင်းပေးပြီး လွတ်မြောက်သန်စွမ်းလာအောင် လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အသင်းတော်တည်ရှိထားရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ မလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပဲ လောဘတက်ချမ်းသာရန်၊ လှပသောသူ များ၊ လူတော်များကိုပို၍ ချဉ်းကပ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ မုဆိုးမများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော သူများ၊ မာရ်နတ်ချည်နှောင်ခြင်းခံ ရသောသူများကို လက်တင်ဆုမတောင်းပေးပါ။ ဤကဲ့သို့ အကျင့်များသည် ပြောင်းပြန်သွားနေခြင်း မဟုတ်ဘူး လား။ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ချီးမွမ်းလျှက် ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကို သတိယစေရန်အတွက် ကျနော်သက်သေခံ ချင်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း လူငယ်ဘ၀တုန်းက လူမကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခါနီးအချိန်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပါ